အိမ်ဝ င်ေ ပါက် ကမှန်ကြီးပေါက်သွားေ အာင် ပစ်လိုက်တဲ့အ ရာ ကို တွေ့ရှိသွားပြီဖြစ် တဲ့ ကျော်သူ – Shwewiki.com
နိုင် ငံကျော်မင်းသားကြီးကျော်သူကတော့ မတ်(၂၀)ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ မနေ့က နေ့လယ်အချိန်လောက်မှာ “ဖောက်” ဆိုတဲ့ စူးရှရှအသံကြားလိုက်ရပြီး ညနေရောက်တော့မှ သတိထားမိလိုက်တဲ့အကြောင်းကို “ဘယ်သူ့ လက်ချက်လဲ? ဘာ လက်နက်လဲ? နေ့လယ်အိမ်မှာထိုင်ပြီး စာဖတ်နေတုန်း “ဖေါက်” ဆိုတဲ့စူးရှရှအသံကြားလိုက်မိတယ်။ ညနေရောက်တော့ တစ်ယောက်က အိမ်ရှေ့ မှန်ကွဲနေတယ်ဆိုလို့ ထကြည့်မှ လူတစ်ရပ်စာအိမ်ဝင်ပေါက်ကမှန်ကြီးတွင် လေသေနတ်ကျည်လိုလို/သံဂေါ်လီလုံးလိုလို ညီညာဝိုင်းစက်နေတဲ့အပေါက်နဲ့ မှန်အက်ကွဲနေတာကိုမြင်ရပါတော့တယ်။
ပစ်ကွင်းအနေအထားအရ တိုက်ရိုက်မှန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကြမ်းခင်းကျောက်ပြား ကိုထောက်၍လာခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်များအား စတစ်ကာကပ်ထားခြင်းကြောင့် တစ်ချပ်လုံးမကွဲ၍ လူများအန္တရာယ်မဖြစ်ခဲ့ပါ။ အထူးပြောလိုသည်မှာ လက်ဆော့သူများ “ဝဋ်လည်တတ်တယ်နော” ။” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မင်းသားကြီးကျော်သူရဲ့ လူတစ်ရပ်စာအိမ်ဝင်ပေါက်ကမှန်ကြီးတွင် လေသေနတ်ကျည်လိုလို/သံဂေါ်လီလုံးလိုလို ညီညာဝိုင်းစက်နေတဲ့အပေါက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အရာကတော့ အပြာရောင် ဖန်ဂေါ်လီဖြစ်ပြီး အပစ်ခံရတဲအချိန်တုန်းကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ ရွှေဇီးကွက်မှ ကွဲသွားတဲ့ မုန်နဲ့အနီးဆုံး ဒန်းပေါ်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုအားကြိုးမာန်တတ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီး ကျော်သူကတော့ အိမ်ကိုအခုလို လက်ဆော့တဲ့သူတွေကို ဝဋ်လည်တတ်တယ်နော် လို့ သတိပေးထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော အခုလို လက်ဆာ့တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံဖူးကြလား။
ကို ရိုနာ ကူးစက်ခံရ ရင် နေ့ရက်အလိုက် ဘယ်လိုေ ဝဒနာတွေ ခံစားရမလဲ ဆိုတာ ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်